News Collection: ललितपुरका लभ प्वाइन्ट
ललितपुरका लभ प्वाइन्ट
अञ्जली रम्तेल- रमणीय प्राकृतिक दृष्यमा हराउँदै मायालुको अँगालोमा हराउन कसलाई मन नलाग्ला? गोदावरीको वनस्पति उद्यानमा आएका प्रेमी जोडीहरू आफ्नै दुनियाँमा हराइरहेका हुन्छन्। चाबहिलबाट गोदावरी पुगेका एक प्रेमी जोडीको भनाइ थियो, 'परिवारसहित पनि यही पार्कमा घुम्न आउनेहरू देखेर भने अलि अप्ठेरो लाग्छ। प्रेमीप्रेमिकाका लागि मात्रै बनाइएका पार्क भए कति रमाइलो हुन्थ्यो।' अँगालोमा बाँधिन र माया गर्न लागि अलि एकान्त र कुना खोजेर बसेका जोडी त पार्कभित्र थुप्रै थिए।
केही बिन्दास जोडी भने कसैको पर्वाह नगरी मेचमा बसेर प्रेमालाप गर्दै थिए। छोराछोरी र श्रीमान्का साथ छुट्टीको दिन गोदावरी घुम्न आएकी स्वयम्भूकी मुना भने यस्तो दृष्य देखेर अकमक्क परिन्।
प्रेमीप्रेमिकाको डेटिङ स्पटजस्तो भयो भनेर निकै गुनासो आउन थालेपछि प्रेमीप्रेमिकाका लागि छुट्टै स्थान पो बनाउन सकिन्छ की भनेर सो उद्यानका अधिकृत विन्देश्वर रायले विचार नगरेका हैनन्। भन्छन्, 'मैले चीनमा भएको वनस्पतिसम्बन्धी गोष्ठीमा उद्यानमा प्रेमीप्रेमिकाका लागि कतै छुट्टै स्थान बनाउने प्रस्ताव राख्दा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नभएको कुरा तिम्रो मुलुकमा हुन्छ भन्ने जवाफ पाएको थिएँ।' वनस्पति उद्यान पार्क नभएर अध्ययन र अवलोकन गर्ने थलोको रूपमा मात्र रहेको उनले बताए। प्रेमीप्रेमिकाकै लागि नबनाइएको भए पनि सो उद्यान आउनेमा प्रेमीप्रेमिकाकै संख्या उल्लेख्य रहेको देखिन्छ।
प्रेम साट्नका लागि ठूलै ठाउँको आवश्यकता पनि सायद पर्दैन। नत्र त लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरी पार्कमा दर्जनौँ प्रेमीपे्रमिकाको हुल किन देखिन्थ्यो र? असाध्यै सानो क्षेत्रफलमा रहेको सो पार्कमा युवा जोडी हात समातेर हिँडिरहेका भेटिन्छन् भने कैयौँ जोडी दुनियाँको पर्वाह नगरी आफ्नै संसारमा रमाइरहेका देखिन्छन्। सो पार्कसँगै रहेका कैयौँ अफिस र घरबाट समेत पार्कमा भइरहेका दृष्य स्पष्ट देख्न सकिने बताउँदै एक स्थानीयवासीले भने, 'उनीहरूको क्रियाकलापले हाम्रा घरका साना बालबालिकामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ।'
ललितपुरको चापागाउँस्थित बज्रबाराही, बुङ्मतीको कार्यविनायक, लेलेको पिआइए पार्क, कुपन्डोलको युएन पार्क डेटिङ स्पटका रूपमा विकसित भइरहेका छन्। त्यस्तै, गोटीखेलको वैतरणीधाम, कालेश्वरको बुर्जुगाडाँडाजस्ता मनोरम स्थान बाटोको अभावका कारण केही ओझेलमा परेका छन्।